Kutheni Ndakha Ukutshata Ngoko Young? — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Izingxi, isingxi kwexesha ubusuku evenkileni ukuze sithathe izinto ezimbalwa kunye ndibene incoko umdla kakhulu osethilini. Senza njengento nje yena ndaqwalasela izinto zam, uze yandipha ikhadi isaphulelo kodwa wamxelela umfazi wam wayesele enye. Yilonto xa ncoko yaba mnandi. Ndiyazi ukuba le ncoko zonke kakuhle kakhulu kuba ndiye ndifeze izihlandlo ezininzi phambi. Ayisafuni into enjengale ...
umntu: Intoni!? Utshate?
mna: Ewe Ndakhe nditshatile emibini enesiqingatha iminyaka ezimangalisayo.
umntu: Ingaba umngakanani? Ubonakala ngathi lusana.
mna: Mna ezingamashumi amathathu.
umntu: Ukuba abantu abaselula ukuze! Yoko le nto ihlabathi ubuya kwenza ntoni ukuba?
mna: Kutheni ndibe?
e 2009, Satshata eneminyaka kunzima zomthetho akafane nangokuhloniphekileyo kominyaka imashumi mabini anamnye ezelwe. Ebudeni bokuthandana yam, uthethathethwano, umtshato mfutshane, Bendikhe wacela ixesha nexesha kwakhona imibuzo efana, "Kutheni atshate abatsha ukuze? Yintoni Ningxamele?”, kwaye yintandane zam zobuqu, "Kufuneka besithembele yaye ubomi bakho!”
Abanye abantu ngokubuza le mibuzo bangabasemzini, kodwa amanye osapho. Ngaba ndiya ndiphambene ukutshata kwindawo 'entsha ezifana” ubudala?
Kulungile ndikuphe izizathu ezithathu ndagqiba ukutshata xa wenza.
1. Ndadibana nebhinqa uThixo
Njengoko freshman elinesibhozo konyaka ubudala kwiikholeji eBhayibhileni, Andazekanga nxada ukhangelana umfazi, kodwa uThixo wabona kufanelekile ukwazisa ukuba ibhinqa eliselula emva entliziyweni yakhe. Wayemhle, kodwa okona kubalulekileyo wayemthanda uYesu. Yena wayeqonda ukuba owayengumoni odinga ubabalo lukaThixo, yaye ye tho, intliziyo sifundiseke. Savalelwa ukuba yinxalenye icawa enye, ngoko ke ukubukela lokumnceda, khula, yaye ngokuthembeka ilinika ithuba kwabanye. Ndaqalisa ukuthetha isangqa yam yangaphakathi ngaye. Abahlobo bam, njengabacebisi, nabefundisi zonke ekuvunyelwene – yena umfazi uThixo. Ndandibona ngokwam ehamba kunye naye lwakhe lothando kuba ubomi bam.
Ngeli xesha ndaqalisa ukucinga malunga into ngomtshato kwaye kuthetha ukuba uyazibophelela ekuqhubekeni umntu ebomini oko. Ndazibuza ukuba okanye hayi mna ukuqola kunye noxanduva ngokwaneleyo. Ndasingasinga ngokusebenzisa iZibhalo kwaye wacinga iimbopheleleko zomyeni, ndithethe nabahlobo abatshatileyo mentors. Emva amaqashiso yomthandazo kunye nencoko, nabancedi kwaye nabefundisi ecaweni wam wandixelela mna ndandicinga ukuba ukulungele ukutshata naye. Mna yakuvuyela. Kodwa ngendingayenzakalisanga kuzisukela ukuba ndandicinga ubengayilungiselelanga ukukhokela ngokomoya, ukubonelela ngokuba yakhe, kwaye ukuba abe yintloko ntsapho.
3. Umtshato intsikelelo
Ekuqaleni ndaziva ngathi Kwafuneka yokubonisa namarhe ukuba nokutshata abaselula ok amaxesha. Kodwa xa ndijonga kwiZibhalo andamfumana ezilolo, "Umtshato ilingana ukufa! Sabani kulo!” okanye, "Beka umtshato off de awukwazi ukuyikhulula nayiphi elide,” okanye, 'Ukutshata kuphela xa sele emdala kakhulu ukuba baphile ubomi,” okanye, "Dlala intsimi umzuzwana athabathe elona lifanelekileyo.”
Endaweni ndafumana imiyalelo ezifana, "Sabani nenkanuko zobutsha”, kwaye ndafunda iindinyana ezifana IMizekeliso 18:22 ukuba ithi, "Othe wafumana umfazi, ufumene okulungileyo; Uzuze okulikholo kuYehova.”
Ngoko xa abantu bathi, "Yintoni ilifa ukuba ukutshata abatsha ukuze?” impendulo yam entsha, "Uza ukubuza umbuzo engalunganga.” Ndiyacinga engcanjini mbuzo yinkolelo yokuba umtshato weba into kude kum, ngokungathi kwasebuncinaneni am balichitha uthando wenza imibingelelo xa aza kusetyenziswa ukuzonwabisa ongathandani kunye flakiness.
Umtshato sisipho esihle esivela kuThixo! Yinto njengendlela ubabalo. Ndafumana umfazi, nokuba yinto entle. Mna engavumelani sengqiqweni ukuba uthi, Khulula iintsikelelo zikaThixo bazizityebi kangangoko unako. Endaweni yoko ndithi kunandipha izipho ezilungileyo zikaThixo, liqondileyo, ngenxa yozuko lwakhe.
Oku akuthethi ukuba wonke umntu umele atshate xa wenza. Bekuya bemkile embi ukuba ndibe wazama ukutshata ngaphambi kokuba ndikulungele. Abanye bethu kufuneka abaqolileyo ngaphezulu, kunye nabanye kuthi kufuneka sithandazele ulwaneliseko kwaye uthembe iNkosi kunye nexesha lakhe. Injongo yam akuthethi ukuba usemncinci zitshata, engcwele kukhona wena. Ndifuna nje yokususa tinsimu ukuba ulibale ekubeni cinga nje emtshatweni xa sele amathathu okanye ngaphezulu.
Last night kutwitter umntu wandibuza ukuba ndiyazisola nokutshata abatsha ukuze. impendulo yam? ngunotshe.
Yinto enye ezona zigqibo endakhe wenza. Mna ndonwabile kwaye ndingcwele kunawe ndandineminyaka emibini enesiqingatha eyadlulayo, kwaye Yinto elungileyo. Andifuni ukuba wenze loo nto ngathi mna mgaqweni ezinye super ezinqabileyo. Ndiyazi Baninzi abantu abaye batshata abaselula nje okanye abancinane kunam. Nabo wabona umtshato njengesipho kwaye siyibonile isiqhamo eso sipho. Mna nomfazi wam Mhlawumbi sisebatsha ngoku, Ke mna ndithandaza kobabalo ukuthanda umfazi wam kakuhle de kwasekupheleni ubomi bethu. Kude kube ngoko ndifuna ukuthobela ubulumko iMizekeliso "nemihlali ngumfazi wobutsha bam.”
Jannon Fitzpatrick • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 6:58 mna • impendulo
I ngentlonelo nga pfumelelani na Kevin Ferere. Awukwazi ukuba yintoni uthando ude wazi ukuba uThixo ngubani, kuba uThixo uluthando! IBhayibhile ayithethi nto ngokuthandana ngeenxa okanye unabanye abantu ukufumanisa ukuba lowo. Inyaniso, UIsake layed on Rebecca yaye esazi yena lowo kuye. Akazange umhla ngeenxa okanye uthethe uLeya ukuze xa yena ngcono ke ange esazi ukuba okanye hayi uRakeli ngokwenene into afuna okanye.
Ukuthetha ngamava yam, Ndenze umhla abanye yaye bafumana yintoni uthando wayengekho. Kungekuphela nje kubudlelwane zam, kodwa abazali bam’ kunye nodade’ ubuhlobo. Ingxaki yaba, abayi ubuhlobo lwasekelwa kwi-iLizwi okanye Uthando likaThixo yaye yiloo nto abazange ukusebenza ngaphandle. Mna ukufumana Man UThixo, ukuze bangasebenza ngendlela yokuba uthi, KODWA I ngentliziyo bakholelwa ukuba ndithe ndilindele kwaye vika intliziyo yam kwabo kwezinye ubudlelwane ezingezizo kum, Bendiya kuba kwindawo engcono kwaye eyaphukileyo kancinci kakhulu, ukuba recieve umyeni wam ngokwembono umfazi lobuthixo kunokuba umbono umfazi eyaphukileyo kunye iimpahla ukusebenza nge.
Akukho indelelo ekujongwe, kodwa mna ndikholelwa ukuba kukho amazwi ingubo becala engalunganga enokuthi ngokwenene ukuqondisa abantu abaselula kwicala elingelilo. (ulwazi Google ngokuthandana lobuthixo vs. Ukuthandana Modern. Kukho ezinye izinto ezilungileyo ngokwenene apho.)
Deborahfatuade • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 6:59 mna • impendulo
KevinFerere • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 6:59 mna • impendulo
Wena wazibonakalisa mna ilungelo. IBhayibhile bangathetha nantoni na afuna, kodwa ukuba amava sonke kufuneka uye nya. Ngubani na ke ndibiza uThixo, livela yincopho lento wafundisa kunye namava akho. Ekugqibeleni, izinto enicinga ukhetho, kodwa uyazi into ebekwe yi nyaniso.
kanye yebo, ingxelo inokuba jikelele bit, kodwa kufuneka wayephethwe wokudla yetyuwa, nje into.
Lokelani70 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:00 mna • impendulo
Nam ngentlonelo Andivumelani Kevin Ferere.
Inye kuphela into singqiniwe ukuba wenze isigqibo nesazela ukuphila ubomi bakho uThixo ngezwi lakhe, i bible. kanti, senze isigqibo ukuphila ubomi bethu ngendlela umtshato lobuthixo, ngalo ilizwi likaThixo. Isibakala lodaba, akayi kuba ukuqonda ngokupheleleyo le blog ukuba uThixo abeke kuqala ebomini bukabani.
Uthandazela ukuba imitshato! Inkosi ikusikelele!
KevinFerere • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:00 mna • impendulo
Ndiye ndenza isigqibo ezazi ukufumana uThixo ngokwam kungekhona koko umntu undifundise. Ungaxhalabi, Ndandidla ukuba abafana nawe.
AC • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 5:53 pm •
Ndingathanda nje ukuba athi, awukwazi ukufumana uThixo. IBhayibhile yathi thina ukuba ufile. abantu abafileyo abakwazi ukwenza into. UThixo esibona.
Oh… Ndicela uxolo Kevin, kufuneka badidekile. UThixo ukukhonza akangoThixo of self-abafuna. Okuxhalabisayo kungekhona ukuthanda kukaThixo, kodwa ngothando eachother kangangoko njengoko uyasithanda ukuba! Like I wabhala ngaphambili, ukubeka uThixo kuqala into efunekayo ukuze aqonde ngokupheleleyo le blog, njengoko impendulo yakho ubonisa ingongoma yam. Ngamana YONKE sithi wenze kuba elikholekileyo kuThixo. UThixo Sikelela uze ube wena ubusuku emangalisayo.
Fru-Mukete Arnold • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:00 mna • impendulo
Hahaha, qhubeka efuna, uya kumfumana thina- khumbula indalo ityhila Naye futhi. Inyaniso, I ll kuninika iqhinga, ukhethe nje iBhayibhile aze ayiphose efana incwadi ibali ukuphawula onke amabango yenza yaye nonqaya ke, khangela ezinye iincwadi uze uthelekise amabango. Kodwa ngokuqinisekileyo kuya kufuneka umntu chaza somethings, musa ukuzibambezela ekubeni obefuna inyaniso.
Ukuba uyakholelwa kuThixo kangangoko usithi wenze, kutheni uvakalelwa imfuneko emlinga kakhulu? Andiqondi ukuba uThixo, ngokuba Yena kum. Mna kuye kwaye ndim. Kodwa Ndiyaxolisa, awukwazi ukuqonda ukuba ungakwazi na?
Delinabini • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:01 mna • impendulo
i andivumi Ungaqiniseka njani uThixo uThixo njani kuwe na uyidala ngokwakho ukuba wena uThixo?
KevinFerere • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:01 mna • impendulo
Okubi kwam, inkinga: *Andiqondi ukuba ubungqina uThixo. *
Kodwa izimvo kuthetha oko ikuthethayo. Nantoni na kuwe, loo nto wena. Musa ukoyika ukwamkela loo nyaniso kukuba wafundisa ukuba akulunganga.
Addis Hunter • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:01 mna • impendulo
100 % nawe! Nam ndadibana nomyeni wam 20 yaye emva konyaka siye satshata. Ndiye ukuba iincoko efanayo nabantu abangabazi random, usapho kunye nabahlobo Ndifuna ukukhuthaza ukuba uhlale uthembekile kuYehova kunye nomfazi wakho ethandekayo ngandlela zonke discribed ilizwi. Umyeni wam ngoku 30 ubudala yaye ndikhe xa ndithi abantu “Okuvuyisayo kukuba” utshatile phantse 10 iminyaka ntu!!! “ngokwenene”?? Ukwenza amagqabaza ezifanayo ngokungacacanga “uchitha ulutsha lwethu” etc etc. Kodwa uThixo waba nenceba kwaye kulungile kuthi ukuba nzima ukuyichaza indlela uyolo mna ukuba ndadibana nomyeni wam xa enza. uthando reminising ngeminyaka yethu kwikholeji kunye, kwaye ukuphupha ngazo zonke izinto ezinkulu ubomi ngenxa yethu ngaphambi! Si 2 amantombazana amahle umntwana oyinkwenkwe endleleni (ukuba ngokuthobeka wathandazela kulo nyaka uThixo wamnika) , (atually Ndiyavuya ngenxa namhlanje ;-))..kwaye couldnt sinokuqiniseka ngakumbi ukuba Yaba umanyano Devine ovela kuThixo ukuba thina kunye.
ngokwendalo, singafani (nangona abahlobo bam bacinga njalo kuba dont sijongene neengxaki eziqhelekileyo yehlabathi zokungathembeki, nokungahloniphi umsindo njalo), kodwa ke zixabana, ukuhamba kweemvakalelo, yeengxaki zemali etc, umahluko kukuba Thembela nguThixo ukuba akhokele amanyathelo ethu, siyabahlonipha omnye komnye kwaye senze konke okusemandleni ethu ukuze siphelelwe UKHOLO, unxibelelwano, uze ufune iingcebiso umoya oyingcwele sisibini kunye individually..My indoda le ngamnye elifana kakhulu kwendakha ndadibana niqonde sobabini ukuba ngundoqo ukuze bonwabe emtshatweni ayikho ukwenza okanye ukuthenga “izinto” ukuze eachother konwaba kodwa Ukwazi thina ezi, elandelayo imiyalelo yakhe ngomtshato Nonothando omnye komnye ibhujiswe, kungakhathaliseki ukuba iimpazamo zethu okanye kanjani “uzive” ngelo mzuzu , sisazi ukuba ulonwabo luya kusoloko kuba imvakalelo yethutyana ukuba uhamba, kodwa uvuyo lokwenyaniso uyeza kuphela eNkosini.
Akwaba wena nomfazi wakho iminyaka emininzi uvuyo, uyolo!!!
I Love umculo wakho kakhulu ngendlela ;)..
josh • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:01 mna • impendulo
Wena umzekelo enkulu kumaKristu abatsha abafuna ukuba bamzukise uThixo ngendlela abaphatha ngayo abafazi! Enkosi! I nje umshado, mna 22, kwaye sijonge phambili ndikhonza eNkosini emtshatweni iminyaka ezayo!
Johnny_renteria • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:02 mna • impendulo
Enoba uyayikholelwa okanye akuyikholelwa, kodwa i ndatshata eneminyaka 18. I kwakungekho ndlela ukulungele ukuba umyeni ngengqiqo zemali kwaye wayesele uyise. Kodwa ukuba nje wanika ubomi bam kuKristu yaye ndandisazi ukuba abafazi kwam kuza kuba lowo kukhula kunye nam. Abantu bandibuza izinto ezifanayo ngokunjalo. Ndikufumanisa buhlungu nangona ukuba umtshato kubonwa njengento embi. namhlanje, Bendicinga malunga ndiya bafika kwisigqibo sokuba abantu bezingca kangangokuba ingcinga yokuthatha uxanduva lomnye umntu nzima. Umtshato xa yaye kutheni satshata kodwa ngubani usekelwe kuloo nto umtshato. Kwaye kufuneka Krestu…
deborah • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:02 mna • impendulo
i ucinga u r trip..i ekunene abe frnd eyatshata @ 19 (ukuba HV beneminyaka 4 6 yrs nw)n lkng @ kuye Ngoku siyabona ngaphandle ukwamkela uKristu dat umphefumlo wakhe d sigqibo okusemandleni akhe owakha wenza….nangona i Mandivume i Andikakulungeli 2 ukufumana married..it sizixhalabisa kum cos andifuni 2 ukuba uthathekile 2 umntu d embi 4 d ubomi bam kodwa ndiyazi uYesu akasoze kum ukwenza d ekukhetheni okubi…Kwakhona i uzibuze y batshata xa i ukufumana zonke i ndifuna kuYesu n yena akanakuze brk hrt yam?….isigqibo ur tye n i-GV u oobhontsi phezulu 4 leyo!:)
MNM103 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:02 mna • impendulo
Le wandifundisa lukhulu. Kwaye ke omkhulu bakuva ngecala lakho umfazi nayo!
uLance Peterson • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:02 mna • impendulo
Kuhle. Unyana wam nabo ukutshata 2 1/2 kwiminyaka eyadlulayo, ukuba ibhinqa elihle uThixo yaye zombini neminyaka engu of 19. Ibali lakho wandikhumbuza kubo.
Brandon, uClement • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:02 mna • impendulo
Ndiyawuthanda lo Uhambo! Ndatshata kwi 22 yaye ndiyithanda kakhulu umtshato wam. Yinto funny kuba nje waba incoko efanayo kunye nomlindi garaji malunga kwinyanga edlulileyo. Yena wasidiliza yonke, “Kutheni kutshata xa unokuba ubisi for free?” umbuzo kunye nentliziyo yam waqhekeza kuye. Ndaza ndahlabela mgama emxelela ukuba umfazi wam wayengekho inkomo–ukuba ibisoyikeka kwaye ndiyamthanda.
Sonako • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:02 mna • impendulo
loool ukuba funny = D
Louib2001 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:02 mna • impendulo
Anna • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:03 mna • impendulo
Oku wathetha oko benizilela mna na. Ndivuya 21 nokuba nobuhlobo kwaye andinako ukukuxelela ukuba mangaphi amatyeli uye waxelelwa ukuba mna “mncinane kakhulu ukuba ukucinga azinze”, Ndingade ndithembe ukuba “impilo kuqala”, ukugqiba isikolo kunye nokuseka umsebenzi phambi kokuba bangene ukuthandana / umtshato. Ube bubungqina esimangalisayo nasekufakeni. Akwaba wena nomfazi wakho ebomini iintsikelelo nolonwabo kunye!
engaziwa • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:03 mna • impendulo
ndingu 20 kwaye abazange Nikhe nanokwalamana ngoko Andizi ukuba ukutshata yi 21 kodwa mna ngokuqinisekileyo ukuhlonipha logic. Ndisoloko wabadlali “aye elowo yakhe”. Ndicinga wena nomfazi wakho ngokuqinisekileyo uya kuhamba umgama kwaye ndinebhongo kakhulu la manyathelo ukuba uthathe ngaphambi kokuba ishade. Kubonakala ngathi nobabini wathabatha nzulu kakhulu committment, leyo Ndiyayincoma.
tony Doyley • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:03 mna • impendulo
basikelelwe kakhulu ukufunda blog yakho ngomtshato esemncinane. Umfazi wam sitshatile kwi 18 kwaye sele etshatile 10 iminyaka ngoku. nathi ukuqinisekisa ukuba ezithile amahla ndinyuka, kodwa mna ndiyakholwa nguThixo guided us ngokuthe chu yonke le minyaka kwaye ngoku asisayi komelela na kunabo kunanini. Enkosi ubungqina yakho emangalisayo.
kle Photography • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:03 mna • impendulo
Halala emtshatweni bakho! nomyeni wam walityhutyha into efanayo xa sitshatile 8 iminyaka edlule 20 iminyaka ubudala! Ngoko siyazi kakuhle into ihamba! Abantu babecinga kokuba sitshatile ngenxa yokuba ndikhulelwe (I wayengekho) okanye ngenxa yokuba i elizweni ngokungekho mthethweni (nguye i ummi waseMelika). Asizange kuninzi ngayo abahlobo bethu kwikona lethu njengoko babesenza into eyodwa. Kodwa ngoku 28 ukuba iyabuya kwaye uzama “ukufumana okudlule.” Ndiyavuya UThixo wamsikelela mna nomyeni wam kungakhathaliseki ubudala yam. UThixo anisikelele kuni nobabini!
BTW Sihlala kwindawo DMV! (MD) mhlawumbi sonke hi nga langutana okanye uye ecaweni kunye! Nangoku musani ukuba abahlobo abatshatileyo lol.
KevinFerere • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:03 mna • impendulo
Andiqondi ukuba kukho into ethe ziyabiwa kuwe, koko into ukuyeka. Yinto cool ukuba isakhiwo eBhayibhileni, kodwa kuxhomekeke kuwe ukuba zilawule ubomi bakho, asiyoncwadi; nangona ukhokelo kunikeza.
Yinto yokuba encomekayo azenzileyo labatsha, kodwa inxenye yaloo “inkanuko abalulutsha” le yokufunda nokukhula ufumana ekuhlangabezaneni nasentlalweni nokubandakanya abafazi ezahlukeneyo. Ukufunda into oyithandayo kwaye ungathanda ukwenza, ukubona, kwaye uzive; endaweni umda wakho ukuba kangaka kumntu nje omnye.
Awunako ngokwenene ndithi uyazi ukuba ungubani na nokuba yintoni na uyeva, okanye nto ufuna ngenene, ukuba basebenzisana kodwa kangaka kunye nabanye abafazi kubo ukubonisa ukuba kuwe. Akuyazi into Uthando ukuba awuyazi into ayinguwe.
Guest • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:03 mna • impendulo
Akuyomfuneko ukuba wazi into Uthando ukuba uyayazi into Uthando. Ubuya kwazi njani xa umntu kukunikeza fake $100 bill ngaphandle kokuba uyayazi into yokwenene $100 bill ibukeke. Kukho real enye kuphela $100 bill, ukufunda kanye loo unokubona xa umntu kukunikeza fake. Okufanayo nothando. Kukho mbumbulu ezininzi apho, kodwa ukuba uyazi ukuba yintoni na real, ke uya kukwazi ukuzibona inkohliso. Ekubeni uThixo uluthando, nantoni abangahloneli ayikwazi ukuba uthando.
KevinFerere • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:04 mna • impendulo
Ngenxa yoko kufuneka uthandana ngeenxa kwaye kumhlangabeza uze ube neentlobano zesini kunye nabanye abantu. Indawo My kanye. Yintoni Thixo luluvo lo. Ungazama kwakho ukwenza imithetho ngalo kuba indalo yethu ukwenza njalo, kunjalo, kufuneka ukumyeka la maphupha kukuba kukho ndawo kakhulu grey phakathi umongo.
Angeldoll1 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:04 mna • impendulo
Ndingavumelani ingxelo yakho ukulala nabanye abantu- STD kaThixo, AIDS kunye nokukhulelwa okungafunekiyo, imiphumo ulwalamano olunjalo. Ukuba ulwela ukuba ulwalamano olunjalo, abazange bafunde ongokuzimisela efanelekileyo kunye nemiba enzulu yokomoya uthando kunokuba inkanuko. Kwakhona ndingavumelani izimvo zakho malunga ngokuthandana phambi ufuna ukwenza ngenxa “uthandana emhlabeni” akukho yimfuneko ukuba ukwazi iqabane evela nonspouse. kwezithandani lobuthixo / ukuthandana kwenziwa ukuba abantu njengoko kubonisiwe eBhayibhileni kanti ukuba namaqabane mutiple, ukwabelana ngesondo random ezi mpawu ezilwanyana.
AJ • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 3:46 pm •
Angeldoll1it intle lungazi kwenu ucinga ukuba bonke sex non-yomtshato ngokuyimfuneko kukhokelela “STD kaThixo, AIDS kunye nokukhulelwa okungafunekiyo”… kodwa ke, wena uya kwazi ukuba akukho nto athathiweyo ixesha ukufumana intloko yakho undicima encwadini yakho enothuli endala baze bafumane amava obomi.
Uyijonga kakubi. Xa sele uqole kwaye ulumke ngokwaneleyo uya kuhamba ngayo ngendlela efanelekileyo. Okukhona Unokukuphepha into, usondela ufika kuyo. Jolisa i positives kwaye yiloo nto uza kufumana. Kodwa ke unqulo lwakho ayifundisi ukuba.
josh • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:04 mna • impendulo
“Akukho namnye unalo uthando olungaphezu kolu uye, ukuba umntu walala phantsi ubomi bakhe abuncamele izihlobo zakhe.” (John 15:13) Uyazi ukuba yintoni uthando, ukuba uyazi uKristu.
sicela nkosi, ukuba uza regurgitate isibhalo, komncinane onokuyenza ukusebenzisa ucinge lakho kuyo. Yinto reference, ingeyoncwadi intetho.
yena • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 12:25 pm • impendulo
uthabathe sakho phezu isibhalo ayilunganga kunye nendlela ocinga ukuba ukuba oluvelayo wena njengomKristu ongenayo balandela iBhayibhile kodwa “iimbekiselo” kodwa ukhetha ukuphila ikhowudi yakho kunye nangezisizilo kwaye akhethe into, ukuba nantoni ukulandela loo nto kaThixo ngaye….
Uninzi lento abathi umi kuyo imfundiso zobuxoki.
Gabe Taviano • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:04 mna • impendulo
Nice ukukubona ukubhloga apha Uhambo! Enkosi kokuthandaza kum kule veki, UThixo qinisekisa undenzele ububele.
Into crazy ngawe siyatshata kangako kukuba iindlebe zakho namehlo aye avuleka kuThixo ngakumbi kwiminyaka embalwa kunokuba abanye ukuba zivaliwe kuye off for ixesha elide. Uyazi ukuba uThixo yinxalenye umtshato wenu kanye njengoko aba babini kuni, kwaye omkhulu. enkoso ngokwabelana!
Madeleine Farrell • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:04 mna • impendulo
Le yinkqubo kakhulu ingcinga. Ndatshata kwi 17 kunye nomyeni wam 19. Ngelo xesha bethu abangamaKristu, kwaye kwakhona, asizange 'ukuba’ tshata. Kunjalo ngenxa yesizathu esithile asizange. Siye batshata phantse 28 1/2 iminyaka ngoku, ukuba abazali 5 nomkhulu of 2. Ndiyabuthanda ubomi bam. Ukuba athi kukho amaxesha emtshatweni wethu ukuba omnye wethu wayefuna nje ukuba ahambe ze buya, ukuba bathi umsindo nengqumbo yayingenakuba yinxalenye yobomi bethu bemihla ngemihla okwexesha, okanye ukucinga estamente wenza impazamo enkulu ebomini bethu wayengenguye ebecinga. Kodwa senza. Kwaye xa umtshato ayisosizathu, UTHIXO kuzisa baphiliswe ngexesha.
Intombi yam watshata kwi 20 yaye kwakungekho namnye ukhuthazo ike onaye kubantu. Akazange ukuqonda isizathu sokuba abantu bazive ukuba licebo lokugqibela endaweni intsikelelo kwangexesha. Nokuba phakathi lamaKristu.
Unyana wethu kwelinye icala watshata ngexesha leKrisimesi, xa eneminyaka 27. Nje Ngeningalifumananga intombazana ekunene. Into enye.. inkwenkwe elungileyo / intombazana ukuti e inkwenkwe elungileyo / intombazana nkqu amaxesha ezinzima. sibambelele nje The Cross.
CL • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:05 mna • impendulo
Andikwazanga kuvumelana. Ngoko ke abantu abaninzi bacinga ukuba umtshato iyoyikeka kwaye akukho ingakumbi akukho sizathu sokuba “rush” kuwo, kodwa ukuba uThixo ufuna ukusebenzisa ukuze akusikelele nokubangcwalisa nathi. Ndiyabulela kuwe ngenxa isithuba!
>> Kodwa xa ndijonga kwiZibhalo andizange ukufumana izinto ezifana, "Umtshato ilingana ukufa! Sabani kulo!"okanye, "Beka umtshato off de awukwazi ukuyikhulula nayiphi elide,"okanye, 'Ukutshata kuphela xa sele emdala kakhulu ukuba baphile ubomi,"okanye, "Dlala intsimi okwethutyana uze ukhethe enye ilungileyo."
unina • EtiMnga 9, 2014 ngexesha 1:48 mna • impendulo
Enkosi kakhulu ukuba ukutyelela blog yam – Ndicinga ndicinge phandle adedrss feed kuwe (I siyiposele kuwe amazwi am). Wena ube nentsapho sithandwa, kunjalo nje! Halala kwi iminyaka yakho!
Praisemovement • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:05 mna • impendulo
Enkosi elubala yakho ngenxa “kokwenza uJesu muhle”. intlonelo Mad ngenxa yendlela livin'and bringin’ udumo iLizwi.
Andrea Paige Jackson • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:05 mna • impendulo
Leyo bubungqina fantastic. Kwaye upose ngalo am neyeshumi engama nomyeni wam! (Satshata UBUDALA, nakuba.) : )
Jcsmsoul • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:05 mna • impendulo
god bless u mzalwana! i ukwazi kakuhle oko u swi nangona i wafumana uNdikhoyo kamva ebomini kwaye i ndinqwenela i wayetshate nendoda uThixo thats inyaniseke kumfazi wayo! ezi dayz nzima yayo kakhulu ukufumana ukuba! kunye nesinye isizathu i Sinethemba yaye sithandazela i ukutshata kwaye ufumane enye kukuba u dont waziva unobutyala xa kusenziwa uthando xa utshatile ur! god bless u!
Jazmin • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:05 mna • impendulo
Enkosi kakhulu na elowo uya kubona umtshato ube yintsikelelo. Ezo kuphela ozithembileyo kunye sikholwe iNkosi yethu uYesu Kristu,. Ukuba ndatshata eselula kakhulu kwaye 28 iminyaka ezindala kunye nomyeni wam kufuneka 3 abantwana ezintle ebomini bethu abazinikeleyo ukuba ndimnqule kumnqula ubawo wethu ezulwini. Umtshato akukho lula kodwa, ngayo ukuba amahla-ndinyuka, kodwa ngenxa yenceba nemfesane kaThixo yaye anikele nokuthanda kwakhe namnye unako ukukhula. Sibamba ngazibini ibali yakho emangalisayo kuba yintsikelelo yokwenene. My iNkosi qhubeka ukuba wena nomfazi wakho ukuze akhule I ucele ubulumko bakhe kwaye uninzi zonke iintsikelelo ezininzi egameni lakho.
Tachy Musica • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:05 mna • impendulo
Ndatshata ukuze “abatsha” njengokuba, kwaye oku kuluncedo, sihlala ndawonye (kuquka intombi yethu ke), sabelana yonke into, lemeko, ezinye ppl bacinga ukuba xa batshata oselula ngoko kuya kuba lixesha elifutshane, Makubulelwe ke kuThixo cishe 8 iminyaka utshatile kwaye ubalulekileyo ukuzama servin’ KaThixo ngawo onke amaxesha…iintsikelelo
Agopylove09 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:05 mna • impendulo
ukuba mihle kangaka!! im 25 kwaye ive ndacinga ngezinto zonke eza kunye nokuba ngumfazi olungileyo yaye ngokwenene Ngokuzithoba yaye uthixo njengoko iziko lakho kwaye sisoloko sifuna icebiso lakhe kuyo yonke kunye nje ngokwenene sivumele uKristu kukhokela nokwakha ulwalamano emhlabeni esiluqilima Krestu jesus..falling uthandana uMsindisi wethu wokuqala ngokwenene kumelwe!! ukuba ukuba nolwalamano olusondeleyo naye alllows ukuba akhule kwaye ukwazi ukuthanda nyhani kwaye UTHIXO ubonelela ngokuba uthando ukuba u kulinika neqabane lakho.. ngoko greatful umsindisi Ngubani usoloko ..<3
Joe Stevens • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:06 mna • impendulo
Ndim oldee ngubani ivumelana ngokuzeleyo Triplee. Nangona ke kuba omzimba ezahlukeneyo (abaneminyaka) ngokuba abantu ezahlukeneyo. Kwaye wonke umntu umele atshate ngexesha lawo yenzelwe nguThixo. ndingu 50 yrs endala, Ndatshata s'thandwa sam xa 23 kanti yena 20! ngoku 27 iminyaka kunye 1 kwenyanga, kukho okuqhubekayo (kulungile) yomlilo phakathi kwethu, nangoku zingqondweni ngothando, Babengabahlobo abasenyongweni nokuhamba kunye nenjongo kaThixo. Ngaba ukodlula iminyaka sitshatile 6 emva kwezinyanga! Kodwa abantwana bam kufuneka bazi circumstacces zabo akuthethi ukuba twatse neyethu, futhi laku kaThixo kunye nezicwangciso kubo kanye okufanayo.
UFemi usozimali • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:06 mna • impendulo
Ndim oldee ngubani ivumelana ngokuzeleyo Triplee. Nangona ke kuba omzimba ezahlukeneyo (abaneminyaka) ngokuba abantu ezahlukeneyo. Yaye wonk 'ukutshata ngexesha lawo yenzelwe nguThixo. ndingu 50 yrs endala, Ndatshata s'thandwa sam xa 23 kanti yena 20! ngoku 27 iminyaka kunye 1 kwenyanga, kukho okuqhubekayo (kulungile) yomlilo phakathi kwethu, nangoku zingqondweni ngothando, Babengabahlobo abasenyongweni nokuhamba kunye nenjongo kaThixo. Ngaba ukodlula iminyaka sitshatile 6 emva kwezinyanga!
Reverandjeff • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:06 mna • impendulo
Ndiyayazi lo zonke kakuhle kakhulu… kubhiyozela unyaka wethu 13 sitshatile, kwaye i mna 35.. Mna ke abantu efanayo imibuzo nam ngendlela efanayo, kodwa thina sobabini wayeyazi uThixo ukuwulungisa futhi wawenza. Thina intersected omnye ubomi afika esemqoka apho iphela iankile ngalinye kwabanye, nge iankile eliqhelekileyo kaKristu. Ingxenye best xa sifumana ithuba ukuthetha nabantu abatsha abafumana ubunzima kubudlelwane / umtshato kwaye sifumana ukuxelela ubungqina bethu obumangalisayo !!! Njengokuba ngenyaniso, ukuba ezinye zezi iingxoxo kunye JPaul kwiminyaka ethile eyadlulayo.. umhlaba Small !!! UThixo awunike abo bamfunayo inkqubo IXABISO OKUHLE, kwaye silibona ixabiso ubambo yethu endaweni runnin emva chickenbones. :)
Jeff Young • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:06 mna • impendulo
Yho ukuze ukwazi, khangela ukuba iphume http://www.facebook.com/reverandjeff #GotAGodlyDime
Bobshumaker • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:06 mna • impendulo
Utata wam & Umama ukuthandana bezikolo zamabanga aphakamileyo yaye satshata emva kokuphumelela (babizwa 18 iminyaka ubudala). Bahlala bonwabile emtshatweni unanamhla kwaye zange phofula bayazisola malunga ubomi babo kunye. Ukuba umntu omdala ukuze aqale umtshato – kunye nesimo sakho ngokuphathelele isigqibo sakho olunamagama abazali bam. Imitshato kokuhlonipha zimbalwa kakhulu kule nkulungwane….UThixo uya kukusikelela, akugcine wonwabe ukuba okungenani 50 okanye 60 kwiminyaka!
Monique Jolicia • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:06 mna • impendulo
Uphi na ibali yomfazi?
Jeffreycotton7 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:06 mna • impendulo
Ndiya kubulela kuwe nomfazi wakho kangaka ngenxa ukwabelana amabali akho. Ndivuya 21 kwaye baziva ngathi i endikuyo phantse imeko efanayo. Mna nje ukutshata kodwa. Mna ukuba wabadlali kutheni ulinde ukuba wena neqabane lakho siyathandana, kokubili ngokomoya, HIV, yaye igqibelele nabanye nganye amehlo. mna intombi yam akukho mathandabuzo ukuba siza ukutshata ngenye imini. Kodwa nangona sobabini ufuna ukutshata, emdala kakhulu ukuba athathe ixesha lakhe; sinazo zonke ixesha uhlobo ehlabathini umntu. Ndivuya kakhulu lohlobo ngomso umntu ASAP cha sithembise. Ngoko kutheni ulinde? Yena yintombazana smart kakhulu. Yena kundikhumbuza umfazi wakho kunye kancinane indaba yakhe. Kuba ndicinga ukuba njengoko izinto ukuze bafumane endleleni iinjongo zesikolo kunye nomsebenzi. Kodwa loo nto ngakumbi yokufumana intetho kids emva komtshato. Ndisoloko ndibaxelela ukuba andifuni ukuba umntwana wethu wokuqala kufutshane 30 iminyaka ubudala. Andifuni umzimba wam ukuba aqalise babuthathaka ngenxa yobudala, nto leyo yenza kube nzima kwaye kuyakhathaza ngakumbi ukudlala jikelele ngocwangciso abantwana bam. Ndifuna 7 e kakhulu kwaye 3 okungenani. Ngoko kuhle yayo ukuqalisa kwiminyaka endilisekileyo. Ke mna ndiya kuqhubeka ukuzama kuyishiya ezandleni zikaThixo Ungakhathazeki ngayo kakhulu kakhulu.
aneetarh • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:07 mna • impendulo
enkosi u Trip n UJess kakhulu, n wonke hu dt wabe i ukhuthazo ngendlela enye okanye d Oda. ngoku ndiyaphila akusayi ukungcangcazela ebusweni gettn etshatile ekuqaleni ingakumbi considern d inyani dt nathi simthande uThixo. UThixo bls u…
Dash • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:07 mna • impendulo
Jannon Fitzpatrick, Ndiyavuma ukuba uThixo uluthando. Indlela kuphela ukuba uthando lokwenene ukuba lowo owadala uthando. Va kubantu sikwazi ukudala nto abanjalo ngaphandle kokuba senza ukuba uThixo ukukhokela ubomi bethu uthando kwakunye. “Akukho namnye unalo uthando olungaphezu kolu uye, ukuba walala phantsi ubomi bakhe abuncamele izihlobo zakhe” Jhn 15:13. Uthando ngokungamfumani ukwaneliseka self (KevinFerere), okanye ukufumana umntu kunokwanelisa nezakubalola ngamaza ombane engqondweni yakho. Okuphoxayo, umfanekiso wakho “Ukudalwa Adam” kwiphepha lakho avela kwixesha Renaissance leyo xa ngcinga uthando ukuthandana lwaba into kuba ukuzanelisa umntu kungakhathaliseki ukuba yintoni na iindleko komnye umntu. Loo Umzobo wona heretical echaza ukuba uAdam uzabalazela ukuba uThixo waza wathabatha inxaxheba indalo yakhe. Indida lo, UMichelangelo ekupheleni kobomi bakhe babona oko akwenzileyo Wazohlwaya, uzama ukuxuba ubuKristu nobuntu (Man ukuba umlinganiselo yezinto zonke). Le ngcinga thando kuba ndicinga apho bevela ? leyo into efanayo baqhuba in Greek, Renaissance, nenkcubeko yanamhlanje. Kukhona ngempela “nto intsha phantsi kwelanga”-uSolomon, Kwakhona eBhayibhileni.
Paul Jones • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:07 mna • impendulo
hey hambo sele etshatile ukususela Ndandi- 22 kwaye 28 ngoku. waba nje anv yethu 6. UThixo kusisikelela 4 intsha. i makathandazele ukuba ugcine ukumsikelela wena nosapho lwakho.
Danz_17unlocked • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:07 mna • impendulo
Le Uhambo ezithandekayo, Ngamana ngokobutyebi UThixo anisikelele u nomfazi ur… kwaye abanye b osikelelayo oku ^ _ ^ <3
CLL • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 12:15 pm • impendulo
Elihle bubungqina ukulunga kukaThixo noko angenza ntoni kubomi ukuba inikezelwe kwiNgxowa ngokupheleleyo kuYe. nomyeni wam satshata eselula (ngexesha 24) yaye wena nomfazi wakho, UThixo wabona kufanelekile ukuba thina kunye uzuko lwakhe. Unyana wethu osel, eneminyaka 20 ekuqaleni kwalo nyaka…ndiphume umphefumlo :-) yaye ngokuqinisekileyo wafumana into elungileyo xa umfazi wakhe uThixo. Sasifuna nto ngakumbi kuba yena naswona va yintsikelelo.
Karenda • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 12:18 pm • impendulo
Yintoni isihloko enkulu! nomyeni wam ndaza kushada ngokunjalo, bendi 22 kunye nomyeni wam 25. We kugubha 15 kweminyaka yomtshato. uYesu, usifundise ngakumbi kunye njengoko isibini kule minyaka, usifundisa ukuba “afele thina ukuba” ukuze uthando ngcono nikhonze abanye. Ukuzingca ingumtshabalalisi inani elinye kwimitshato ezininzi.
Ndiyabulela ngokuvuma kwakho ukuthetha phambi nokunyaniseka malunga nesihloko ngomtshato njengoko inxulumene engcwele!
Michael • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 1:16 pm • impendulo
nomfazi wam niqiqa 21 njengokuba, nokuba oko 11 iminyaka kunye 6 abantwana edlule (bio / eyamkelwe / ngabondli). Ndandingazi ukuba “usemncane kakhulu” ukutshata, I nje wayesazi yena lowo Ndandingafuni ukuba ukuphila ngaphandle! UThixo undenzele ububele.
AJ • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 2:16 pm • impendulo
Ukufunda phakathi kwemigca: sasikuthanda uYesu saza horny.
I funda oku kwenzeka lonke ixesha phakathi kwamaKristu yaye ucinge iingxoxo ezifana nezi ukuba axhentse ngeenxa zonke izizathu wokwenene hilarious. It usaya sinesono ukuba nje ngesondo, ngoko ke olumke ukuba batyhuthuzele ukuzibophelela ubomi.
uClara • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 2:21 pm • impendulo
UThixo uqalile ukuba Umtshato uya kubona ukuba ngalo lonke. Wena kubakhuthaza abatsha christian ulutsha kunye ezitshatileyo Uhambo. inkosi ikusikelele!!
JOB • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 2:52 pm • impendulo
Ndatshata xa eneminyaka 21 kwaye kulo nyaka njengoko Trip Lee, ngo 2009. Ndadibana naye ecaweni xa ndandineminyaka 16 ubudala yaye siye kunye phantse 8 iminyaka ngoku. Siye sakhonza kunye uThixo kwabaphathiswa AYCM, ezizama kwiidolophana kunye nokwabelana ilizwi likaThixo Philippines. Saxelela enye yemihla ngemihla ngalinye “Ndikuthanda kuba ndiyabona ukuba umthanda uThixo”. Mna ngonaphakade wazisola simcele ukuba isandla sakhe emtshatweni. Ixesha eladlula 4 iminyaka umtshato kuye kwaba yintsikelelo.
THATMAN • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 2:55 pm • impendulo
https://twitter.com/KEVINFERERE <<< kuba lo mfo?? hleka kakhulu
uIsake • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 4:06 pm • impendulo
Ilizwi likaThixo ngenene olukhulu. IMizekeliso 18:22 ikhombisa le ngokucacile.
”Othe wafumana umfazi, ufumene okulungileyo, kwaye uyamkeleka Lord''.
uthabathe wam ukuze nabani na ofuna ukutshata kukuba ukubuza kuqala ulwalathiso lukaThixo xa sikhetha iqabane ekunene. Thina njengabantu shouldnt ukwenza izigqibo zethu kwaye forcifully cela kuThixo ukuba yalisikelela. kunokuba, kufuneka anikezele ethobela iyonke, ukufanelekela ukuba ubabalo lukaThixo uze ucele ulwalathiso ukuze silandele ulwalathiso lwakhe ukuze ubomi bethu.
SteveMcMillon • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 4:40 pm • impendulo
I ukuhlonipha le kakhulu kangangokuba!! Its Kuyakhuthaza kuba wayefuna ukutshata ngonaphakade ukususela 6 yrs endala kunye alot abantu babeka phantsi kuba. Ngeendlela ezininzi idale ibenza kum. Enkosi kwakhona kule!
icherri • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 4:59 pm • impendulo
A kancinci 35 kwiminyaka eyadlulayo ndatshata s'thandwa isikolo yam. Sobabili 18, phantse 19. Saba namarhe ezininzi kwaye utata wam wayenethemba Ungafumana umtshato kwaye ufumane ugqirha. Xa uThixo ulungiselela umtshato akunamsebenzi ukuba ubudala umtshakazi nomyeni. iintsikelelo ezininzi!
missy • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 6:01 pm • impendulo
Mna nditshatile abatsha (20 ukuba ngqo). ngoku kwi 32, Ndiva ngathi unako abatshatileyo naliphi na ubudala banikwa nangalo naliphi na ixesha ukuba ngubani… uThixo uya kusebenzisa umntu othanda Naye nawuphi na imeko ukusondela kuye ukusondela loo mntu… sonke kufuneka ube ukulungele ukuba ibe ngcwele njengoko ngcwele. Yiloo nto andikholelwa ukuba kukho “eyona”… Naziphi na abantu abakhetha ukutshata, babe “i omnye” ngokuba eachother :)
missy • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 6:02 pm • impendulo
kodwa ke oku kuyinyaniso kuphela ukuba zombini abakholwayo
Johnny • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 10:27 pm • impendulo
Enkosi kakhulu. nomfazi wam yaye ibali efanayo. Umhlobo kufakwa kulo namhlanje yaye oko kwakufuneka. Dumisani iNkosi yethu uYesu!
Lise • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 10:39 pm • impendulo
Ndiyabulela ngokuba eli nqaku! ndingu 36 ubudala yaye sele nditshatile 19yrs…Yep, bendi 17 xa nditshatile umyeni wam 18yr endala! Sine kids ezintandathu, abathanda iNkosi kwaye bayavuya kakhulu :) sicelwa imibuzo efanayo ngalo lonke ixesha yaye ngoxa kungenzeka ukuba kungabi ukhetho ethandwayo okanye ukhetho ekunene kwabaninzi, Mna imihla Ndivuya kakhulu yaye ndiqinisekile ukuba senza ukhetho tye, thina.
Steffan • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 11:18 pm • impendulo
Oku elimangalisayo. Ndiyazi Baninzi abantu abacinga le mpazamo inkulu ebomini bakho. ndingu 22 kwaye ngokwenene sele ucinga oku nomntu mna ke ndiyamazi yaye wayethanda ukususela kunyaka wam sophomore kwisikolo samabanga aphakamileyo. Mna izinto qiniseka ukuba akukho ukukhanya umnyama wena, kananjalo aniqondi ndilindele ukuba mna. Ndiyaniyaleza ngenxa yithini, nibubekile nxamnye bonke ububi kwaye ujonge lo mfanekiso enkulu kwaye waziva oko uThixo kunikhokelela. Ukuba akukho namnye umntu ngonaphakade ezivuyisayo, I am ngokwenene.
Kim Hunter • EyeDwarha 4, 2013 ngexesha 8:30 mna • impendulo
Ndiye ndadibana nomyeni wam 14 satshata xa ndandineminyaka 21 kwaye waba 23 siye nindawonye ukuze 22 iminyaka nditshate 15 labo 22 akukho nto iphosakeleyo ukutshata amantshontsho alo nje indlela umntu ujonga ubomi….kuba ngokwenene lifr bakho buza kuba njani….Yebo mna nomyeni wam zigcinwe kwaye ukholwe kuthixo yaye siphila ubomi bethu kuye uThixo zonke izinto zinokwenzeka ingakumbi nto umtshato elide healthly onothando lula kodwa uthixo ungenza kube…….USIKELELKE!!
Khankanya: Kwakutheni ukuze batshata kangako? - Kingdom Cakers Kingdom Cakers
Cherisse • EyeDwarha 4, 2013 ngexesha 9:43 mna • impendulo
Yintoni intsikelelo ukwazi iNkosi yaye ukuqonda ilizwi lakhe. Akwaba bekukho abantu abafana nawe. Musa ukuvumela uMtyholi kukudimaze. Siyazi ukuba yonke indawo.
GrantYoung • EyeDwarha 4, 2013 ngexesha 12:44 pm • impendulo
nomfazi wam satshata xa 22 kwaye mna amava efanayo. Abahlobo abasindiswayo kwaye olungagcinwanga wayefuna ukuba undazise kwafuneka ubomi ngaphezulu ukuba baphile. iinwele zam wandikhumbuza zonke clubbing kunye idle ndikwazi ukukwenza. yam “close” abahlobo wachaza ukuba kwakukho nezinye iintlanzi elwandle ukuhlola. kakuhle, ukuba okunene sitshate ngeenxa ngexesha elifanayo 3 nezinye izibini ubudala yethu benza! Sicela abambalwa kodwa ngokuqinisekileyo hayi yedwa kwaye oko kukhuthaza ukukhumbula ukuba.
Ngobabalo lukaThixo kugubha 3 iminyaka kwaye its been kuhle! Enkosi kuwe ekwabelaneni Uhambo!
uphawu • EyeDwarha 4, 2013 ngexesha 4:24 pm • impendulo
uthabathe bam kuba ukuba ufuna ukutshata kangako, uyazi kakuhle imiphumo ukwenza njalo. Kunzima kakhulu nkqu kakhulu kwiimeko. Ukuba ukulungele ukusebenza enzima wena ndayiva esebenza ngokupheleleyo mbingelelo nokujongana ezininzi ezidimazayo nobuhlungu, musa sayina kuyo. nokuba, ukuba ungakwazi ukunyamezela (yaye abanye abantu) ukuba kungaba nomvuzo maxa wambi.
kevin • EyeDwarha 4, 2013 ngexesha 5:42 pm • impendulo
Ndiyawuthanda lo mbono isekelwe iBhayibheli. Yinto obungaqhelekanga American Christian, apho izakhiwo yenkcubeko neyentlalo kangaka anti-umtshato, ukubona umntu oselula, nkqu nomntu omdala, kuba umbono oqolileyo ngokomoya ezinjalo ngexabiso yeziko kaThixo. Ngokusekelwe abaninzi izimvo Ndiye ukufunda, le mbono umsindo basemzini abantu, nokuba kwiCawa kuba ndiye ukuba thina ukwayama ngokubhekiselele izithethe zentlalo imini kunokuba ngayo ebhayibhileni egcina uThixo ixatyiswe ize besazisa. Ukuthandaza wena uhambo, ugcine ukwabelana iVangeli kunye inyaniso yelizwi likaThixo benza kunye yokwenene ebomini okholwayo ukuba.
PastorRob • EyeDwarha 5, 2013 ngexesha 6:55 mna • impendulo
Ndifuna ukuba nawe uyayazi Uhambo- Lee ndatshata 2 iinyanga emva kokuba Ndajika 21. Ngaba UThixo zonke kulo? Ngaba ke zonke kuyo nangona ngokoluvo nokuqiqa kwabo kutheni na ukuba sitshate abantu ukuba kufuneka ukuba ulinde. Umntu kaThixo sele nditshatile 16 ngoku iminyaka 2 Beautiful amantombazana kunye mna greatful ngocoselelo kuThixo olumkileyo UThixo, jewel obekekileyo elinqabileyo. Ubuhle malunga ubungqina wakho ukuba ebilungiselelwe wena kubaxelela!!!
Khankanya: v single. nditshatile… | Intsingiselo of Life
Mavis • EyoMqungu 28, 2014 ngexesha 10:10 mna • impendulo
Mna amacebiso kubo bonke abantu abatsha. Ukuba 18 okanye ngaphezulu, iqala ukufuna iqabane! Ngesondo ngaphandle ukuba umtshato uya kukuzisela wena into ebuhlungu, leaness umphefumlo kunye nempilo embi, engqondweni nasemzimbeni. Utshatile uvuyo yaye booster kwezoqoqosho! Ungafumana lukhulu ngakumbi kwenziwe onwabele lufe lukhulu ngakumbi ukuba wena wedwa. abazali bakho baqhawula umtshato kuba bengazange ukulandela iintliziyo zabo ebutsheni babo! Andinalo isithuba ukuba uchaze zonke, kodwa zakhiwa ukuba seyifuna. Qala ngokwenza uluhlu yor lwe kufuneka ube neempawu ngoko nangoko batshate abatsha ngeli une ngentliziyo yakho yonke ukunika. ndingu 53 kwaye grayeful kakhulu ukuba osu-. Ndanditshatile kwi 31 -amaxesha yayibuhlungu amaninzi amaqashiso ukuba kungachithwa ulutsha-ndlela ndlela kakhulu emva kwexesha. Ukulindela kwenziwa ukuba uya kuba sisilumko ebutsheni bakho yaye sibunandiphe ngokubakho kuyo!
GOSPELMAGDOTCOM • EyoMdumba 6, 2014 ngexesha 8:33 mna • impendulo
Uhambo Dear Lee,
Sivuyile ufunda amanqaku akho.
Ngaba kusinika isigunyaziso ukuguqula amanqaku akho abe isiFrentshi kwaye ukuwashicilela kwi website yethu: gospelmag.com?
Enkosi kakhulu kwangaphambili ukuba impendulo yakho.
Mercy • EyoMdumba 15, 2014 ngexesha 3:14 pm • impendulo
Umhlobo wam uthenge kum le ncwadi xa elivisayo ngokuba umfana, umfazi yamaKristu ehloniphekileyo. Kakade ke ziyakhuthazwa ulinde de batshate kwaye yonke into yaye iivesi lonke. It bese bayizisa yena up ngokwakhe ukuba uThixo akafuni ukuba umhla. I wenza isibhambathiso kum ukuba ndiza imida kunye abafana (Ndicinga ukuba phantse mna kwenziwa ngokupheleleyo ziba neentloni yam). Bendiya ukugcina izinto ezithile ukuze umtshato kodwa nangaphandle elidlulileyo 2 minyaka I Siyifumene edandathekileyo. I ngokudikwa ndililolo. Ndandizibuza yintoni engalunganga kunye nam ukuba ndithe mna okulungileyo ngokwaneleyo. Andingo. Andazi yonke ivesi bible. Ndifuna ukufunda okuninzi. Ndakhe bezama kwaye andifuni ukuba ukwazi nje nawuphi umfana kuba kaloku andiyi kuba intliziyo yaye unako Ndikhaphe phantsi endleleni uThixo akafuni phantsi kodwa nesithukuthezi. Kuhlala omhle ukubona abanye abantu abatsha uthando. Yinto nokuba NGCONO ukuba utshatile kwaye ndiyazi ukuba akulunganga ukuba nomona, kodwa wonke umntu uthi “oh, iyakuba kufika ngexesha ixesha”. Ndicinga ngayo rhoqo muva. Ndadibana nale guy lihle. Thina nabanobuntu ezifanayo kakhulu, kodwa wathi yena ongafuniyo ukuya ecaweni. Uthe ukholelwa kuThixo yaye ndiyazi ukuba abafezekanga mna kodwa andikwazi kukunceda bayazibuza kuba andiqondi ndicinga ukuba ngenkuthalo efuna uThixo ukuba ndiza kuzisola into. Abasetyhini akufanelanga uzibe ukuzama ukutshintsha amadoda ndeva. Oku kukhokelela ukuphoxeka okuthiwa. kakuhle, Ndidiniwe silindile. Ndiyaqonda ndiza kufunda indlela kabuhlungu. Andenzi ngesondo nakuba. Ndivuya 23 kwaye iqine ngaloo kodwa ndiqinisekile udidekile kutheni andikulingene indoda ngoku. Wonke umntu ufumana into abafuna. Yinto ikruqula kangaka nje mna andikwazi ukuyeka ukucinga guys. I ufumana ukuze ndidandathekile maxa wambi. Ukuba ndinokutshata lo mfo kwaye ke ayitshintshanga siya ukunxulumana nabolunye? Abanye abantu baye yonke. Kwaye mna ndifana nothi imali. Ndifuna nje umntu ondixabisayo. Yinto kakhulu ukuchaza.
natalie • EyoKwindla 11, 2015 ngexesha 1:21 pm • impendulo
Wena useyi kuphela 23! :) Musa ukuzikhathaza bengafumani i “kunene” Nye, akukho umntu nje omnye phaya yindlela elungileyo. Kwaye nje ukuba acacise: Wena ulingana IT. Kukho isizathu ukuba wena kulo mhlaba ngeli xesha. Wena babalulekile kuYesu, ukufunda nje ibango izithembiso zakhe xa uqala ukucinga ukuba zililize ekungekho nzuzo ngayo. ozithandayo yam: “Andiyi kukha ndikushiye, akayi kukushiya.”
Umntu ndandisazi kutshanje baqhawula umtshato, kunye yinkinga enkulu emtshatweni wabo ukuba ikholwa yena wayengekho. Isigqibo Kuya kufuneka ukuba wenze uya kuba “uThixo kunomvuzo?” Qhubeka efuna uYehova ngentliziyo yenu yonke, kwaye siyakuthumela. Yena uya kunikhokelela. Uza kubonelela ukhuthazo ufuna xa uziva udandathekile yaye udandathekile. Into ndiyifumene eluncedo kakhulu ukufunda iSibhalo ngokuvakalayo ngaphambi kokuba ndiye kulala, ngokukodwa xa ndiziva ndidakumbile yaye phantsi kuhlaselwa lutshaba. Ngeke wazi ukuba yintoni na nguThixo ngeenxa nje ekoneni.. ukuba nguwe kuphela ulinda. Ndiyazi umsindo kangaka nzima nangokunyanisekileyo, ikruqula, kodwa ukuba uya kuqhubeka efuna iNkosi, Uya kukwanelisa kweli xesha. Kukho isizathu wena kwixesha! Ngeke wazi ukuba uThixo uya kusebenzisa oko kube bubungqina ukunceda amanye amantombazana aselula abakufumana kunzima ukumelana into efanayo! :) Ndiyathemba oku kwabanceda ngandlela thile! iintsikelelo!
tshireletsopreciousntumo • EyeNkanga 7, 2014 ngexesha 2:43 mna • impendulo
Le nto ke kufuneka ukuva, enkosi wena UTHIXO akusikelele
Micheala • EyoKwindla 22, 2015 ngexesha 8:32 mna • impendulo
Ndatshata kwi 21 yaye wayemhle …
Awunako ukunceda wena wa uthando okanye xa ukuyithanda nabo,
Andizange ndicinge ukuba ndiza kuba uhlobo batshate abaselula ndiphoswe phezu “izinto fun” ekuphileni .. kodwa andiqondi ukuba i wenza, I nje wamzonda “izinto fun” nomntu uthando ndandingenakho nokulicingela uphila ngaphandle.
Gisselle • EyoKwindla 28, 2015 ngexesha 7:41 mna • impendulo
Molweni mna ndicela Gisselle Ndisuka Honduras. Ndivuya 18 ubudala nesoka yam 19. siyilindela 15 kwiinyanga ezidlulileyo enkonzweni yakhe eNew York! Ndihlala e Honduras.. Ngoko ke iye ibe distance relationship elide. Endikulo unyaka wam wesibini kwikholeji ukuze njengoko. Siye sathetha ngayo ukutshata. Kwaye ezinye izalamane kunye namadoda kwicawa yakhe zethu uyasixhasa basixelele yeyona nto ilungileyo yokwenza. Ndiseyilaa engakhuselekanga ngayo.. Umama wam ukuvula kakhulu ngam siyatshata beselula yaye ukuze noodade bam. Besisoloko sithandazela ukususela sasicinga kuqala ngomtshato njengethuba. Ukuba ukubhala ukuba email kwam i Bendingavuya kakhulu!
Jennifer • EyeKhala 8, 2015 ngexesha 3:11 pm • impendulo
Siye satshata 21 Kwiminyaka eyadlulayo. bendi 19 kunye nomyeni wam 21. Siye sasondela sisondelelane nakuThixo. kids ezintathu kamva sijonge phambili elilandelayo 20.
Charles • EyeThupha 9, 2015 ngexesha 11:07 pm • impendulo
Ndandifuna nje ukuba athi enkosi ngendlela ngqo phambili ukuba ushumayela izwi Gods. I nje ndabukela i 'fallin’ ividiyo yomculo emva kosuku lwe ezityhutyhayo nezilingo kwaye uzive ngokungathi uThixo wathetha kanye into endikuyo. I ezimangalisayo Isipho uGrace ukuba sabelane ayinakulinganiswa okanye athathwe lula. Ndiyabulela kakhulu ngokuba kwakhona lokuvula amehlo am, ukuba into esisiseko kangaka kuhambo lwam noThixo. Kwakhona Ndiyathandaza ukuba uThixo uya kukusikela elungeniselweni entsimini yakho.
Chidera • EyeThupha 18, 2015 ngexesha 2:48 pm • impendulo
Xa UThixo ubonisa ukuba umntu kwaye umntu unalo inkanuko efanayo ngoThixo njengoko yaye ukulungele ukuhamba yonke indlela. akunamsebenzi ukuba ubudala, xa kufika ixesha utshata. Le nto ukuvuma nje kuye zonke iindlela zakho, yena uya kuwenza uthi tye umendo wakho (IMizekeliso 3:6). ube nje uthando kunye nothando lukaThixo, ngexesha elifanelekileyo uza kukunika nayo wakho uza kuma nani ngalo lonke. Yenza yingxenye akukho wanna, ngoko musani ahlukane kuThixo. Kuzo zonke iindlela zakho ukuvuma ngaye, he'ell wenze indlela yakho ngqo.
stacy • EtiMnga 14, 2015 ngexesha 3:57 pm • impendulo
Umyeni wam 3/4 emnyama namhlophe ngekota.(Ndimhlophe). nomyeni wam kokuba nditshatile young nam 18 ndiya e 19 kunye nomyeni wam 20. Abantu usixelele ukuba, thina benza impazamo kwaye aya kumthuma mtshato. Asizange siphulaphule ndatshata ibe kuye ngoku 16 kwiminyaka. UThixo uyalawula.
jaysmith • EyoKwindla 12, 2016 ngexesha 7:34 pm • impendulo
kevin–ubonakala ngathi ngathi ndineendawana phantsi. Kwaye ukusebenza indlela yakho phezulu. Qhubeka uhamba, kid! Ekugqibeleni, ukuba uzazi isiqingatha ngokunjalo ke inkoliso vattle, nakuba naziphi na iziphene. iintsikelelo!
TheRealHonestTruth • EyoKwindla 27, 2016 ngexesha 2:44 pm • impendulo
Kakuhle abantu ukuba basikelelwe luck Zintle kakhulu NO iingxaki zempilo maxa onke kwaye utshatile kunye njengentsapho eninzi imali ngokuqinisekileyo ongaka ukuba sibe nombulelo gqitha kuba ekubeni ngokwenene kufuneka awunasizathu sokukhalaza xa uninzi lwethu NOT ukuba unethamsanqa kwaphela nangona abaninzi kuni batshata abaselula kakhulu apho kukho ezininzi kuni nangoku ndawonye namhlanje.
Tye Smith • Isilimela 26, 2016 ngexesha 9:55 pm • impendulo
namasu kakhulu weza elivate inkampu on friday 24/6/2016
RachelSanchez • EyeNkanga 2, 2016 ngexesha 1:14 pm • impendulo
nomyeni wam satshata ekuqaleni kwalo nyaka. Ngu 22, kwaye mna 21. Ndiba wacela lonke ixesha sokuba ndingazi kuba “ulahle ebutsheni bam kude” okanye kutheni Bendiya ukucinga kokutshata kwikholeji. I Akumangalisi ukufumana izimvo kakhulu eyenzakalisayo kubafazi abadala ababonakala ukukhangela phantsi kwam. Yinto ezibuhlungu ukuba abanye abakwazi ukubona ukuba ndize okunene kumnandi ngokwenene kwasebuncinaneni bam kunye nomntu wam ozithandayo kakhulu ehlabathini. Yinto yakhathazeka xa abantu (izizukulwana abadala) ucinga ukuba kulungile ngokupheleleyo ukuba abantu ukulala ngeenxa 20 zabo, kodwa xa sele betshatile kube kwakusothusa yaye amanwele. Thina nje Sinethemba umtshato wethu nga abanokukhuthaza abanye ukuba athathe inyathelo xa beziva belungele, kungakhathaliseki ukuba uluntu othi.
Inyaniso Okubuhlungu kakhulu • EyeNkanga 27, 2017 ngexesha 8:09 mna • impendulo
Ngoko kukho abaninzi thina madoda ezilungileyo single ukuba ayecinga ngokwenene ukuhlangabezana umfazi elungileyo ukuzinza kunye, kodwa ngelishwa ke nangoku kuye kwenzeke ukuba thina. Yaye amadoda kunye nabafazi ababenaye kakhulu basikelelwe kakhulu ukuba wadibana omnye komnye yaye intsapho apho ngenene kangaka kakhulu ukuba sibe nombulelo.
alvina.reborn • EyoMqungu 3, 2018 ngexesha 2:39 pm • impendulo
Siyabonga alot Uhambo. Kangangeminyaka ndiye ndayixelayo mna andinako kuphela kutshata ezidlulileyo kwiminyaka ethile. Kodwa ngoku ndiyazi ukuba ikho.